Iràka: “Tsy Misy Iraharahian’i Obama Antsika…” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Mey 2018 4:31 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, 繁體中文, 简体中文, Français, English
“Tsy Misy Iraharahian'i Obama Antsika”… Toy izany no fanehoankevitr'i Iraqi Pundit [amin'ny teny anglisy toy ireo bilaogy rehetra tanisaina ato] .
Ankoatra ireo efa “fahita mahazatra“, tsy dia misy firy ny fanehoankevitra hita eny anaty bilaogy irakiàna momba ny fifidianana izay ho filoha amerikàna. Saingy midika zavatra betsaka koa anefa io fahanginana io. Nisy namana vitsivitsy nanome fanazavàna ho an'ilay vehivavy biloagera Neurotic Wife :
Ny fanendrena an'i Joe Biden ho kandidà ho filoha lefitra dia nahatonga ireo bilaogera ho mahimahina manoloana ny kandidà demaokraty Barack Obama. Iraqi Pundit manome ny heviny :
Nibras Kazimi manampy hoe :
Ny tanjaka « ara-tsaina » ananan'i Biden ve tsy tokony hoe entina hanamarinana ny maha-ao anaty lisitr'i Obama azy mba hamenoana ny tsy fahampian'ny traikefany? Tsy dia lanin'ny vavonin'ny kilasy politika ao Iràka anefa io. Tsy dia mampahazo aina azy ireo ny nanendrena an'i Biden, izay ny anarany dia mifamatotra mandrakariva, eo imason'ny Irakiàna, aminà drafitra iray ho fanasamahana tampoka an'i Iràka.
Mandritra izany fotoana izany, Iraqi Atheist mampitaha an'i Obama amin'ilay fandaharana ankafiziny ao amin'ny fahitalavitra. Hoy izy manoratra :« Ny andiany faha 4 amin'ny LOST mbola lafatra kokoa. Ary mbola tsara lavitra noho izany aza i Barack Obama », ary Neurotic Wife mangataka amin'ireo Irakiàna izay tafiditra ao anatin'ny faritra maitso mba hanome ny hevitr'izy ireo. Manoratra izy: